မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၅) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၅)
မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး- အ ပိုင်း (၅)
Posted by aye.kk on Jun 19, 2012 in My Dear Diary | 26 comments
ကျ မ နေ ထိုင် သည့် နေ ရာ အ ထိ ၊ ဦး က သူ ၏ ဝတ် စုံ နှင့် ပင် လိုက် ပို့ပေး ခဲ့ ပါ သည် ။
သ္မီး ရန် ကုန် မှာ ရောက် နေ တာ ကြား သိ သ ဖြင့် ၊ ကြား ကြား ခြင်း ပင် လို က် ရှာ မိ ကြောင်း ၊ နောက် ရက် တွင် သ ဘောင်္ ပြန် တက် မည် ။ သုံး လေး လ ကြာ မည် ဒီ တ ခါ ပြန် လာ လျှင် အေး ဆေး တွေ့ခြင် ကြောင်း ပြော ပါ သည် ။ ထို အ တော အ တွင်း သ င်္ဘော ပေါ် မှ စာ မ ကြာ ထဲ့ မည် ဟု မှာ သွား ပါ သည်။
ရေး သား သော စာ များ နှင့် အ တူ ၊ သူ ၏ ပိုက် ဆံ အိပ် ကပ် အ တွင်း အ မြဲ တမ်း ထည့် ထား သည့် ကျ မ နှင့် အ တူ ရိုက် ထား သည့် ဓါတ် ပုံ လေး အား သက် သေ အဖြစ် ထည့် ပေး လာ ပါ သည်။
ပြန် တွေ့သည့် အ ချိန် ၊(၈) နှစ် ခန့်ကြာ မြင့် ခဲ့ ပါ သည်။ ကျ မ အ သက် နှစ် ဆယ် ရောက် သည့် အ ချိန် ၌ ၊ ကွက် တိ ပြန် လာ ခဲ့ ခြင်း ဖြစ် ပါ သည် ။ အစ် မ ကြီး ကျယ် ပြော သော စ ကား အား ဆက် စပ် လျှက် တွေး မိ လာ ပါ သည် ။ မှာ သွား သည့် အ ကြောင်း အ ရာ များ က ဘာ များ ဖြစ် မည် ဆို တာ ကို ရိပ် စား လာ မိ သ လို ဖြစ် ပါ သည် ။
ငယ် စဉ် က ချစ် ခင် အား ကိုး သည့် စိတ် ၊ အ သက် အ ရွယ် ကွာ ဟ မှု များ …
သံ ယော ဇဉ် နှင့် လွမ်း တာ က …….
ချစ် ခြင်း ဆို ပါ လျှင် ၊ လွန် စွာ မှား ယွင်း သွား နိုင် ပါ သည် ။ ဓါတ် ပုံ က မ ပျောက် မ ပျက် ၊ ဝါ ဖန့်ဖန် ့အ ရောင် တောင် ပေါက် နေ ပါ သည် ။ အ မြဲ တန်း အိပ် ကဒ် ထဲ ထည့် ခါ ၊ ဆောင် ထား သည် ဆို ပါ လျှင် ……၊ ကျ မ အား လက် ထပ် လို ခြင်း ပင် လား ။ ခ လေး ဘ ဝ က နား မ လည် စိတ် ဖြင့် ပြော ခဲ့ မိ ခြင်း က ၊ အ တည် မ ဟုတ် ။ နား မ လည် ၍ ပြော ခဲ့ ခြင်း သာ လျှင် ဖြစ် ပါ သည် ။
ဒါ ကို အ တည် ဟု ဆို လျှင် ၊ အိုး ခြမ်း ကွဲ က ပြန် မ ဆက် နိုင် မှန်း သိ လျှက် နှင့် အ သစ် ပြန် စ ၍ အ ဖြစ် နိုင် ။ ဒီ ပုတ် ထဲ က ဒီ ပဲ ဟု အ ဆို ခံ ရ မည့် ပါး စပ် များ ၊ ကျ မ က ဦး ကို ဦး တ ယောက် လို သာ သံ ယော စဉ် ဖြစ် တွယ် နေ မိ ခြင်း သာ လျှင် ဖြစ် ပေ သည် ။ ဦး က သူ့အ သိုင်း ဝိုင်း အား ထပ် မံ သ တ္တိ ရှိ စွာ ဖြင့် စိန် ခေါ် မှု ပြု လုပ် ရ ပေ မည် ။
အိမ် ထောင် ဖက် ဆို သည့် စ ကား ၊ ကြား သိ ယုံ မျှ ဖြင့် ကျော ချမ်း နေ မိ ပါ သည် ။ ဦး အ ရွယ် အား အိမ် ထောင် ဖက် အ နေ ဖြင့် စဉ်း စား ကြည့် ၍ ပင် မ ရ နိုင် ပါ ။ ဒီ တစ် ခါ ဦး ပြန် လာ လျှင် ၊ လာ တွေ ့လျှင် ကျ မ ဘယ် လို ရင် ဆိုင် မည် နည်း ။ လွမ်း သည့် စိတ် က ချစ် ခြင်း မေ တ္တာ တ ရား ကြောင့် ဖြစ် ပေါ် လာ သည် မ ဟုတ် ၊ ကျ မ ၏ လက် ဖ ဝါး တွင် ပါ ရှိ သော ၊ သော ကြာ ဂြိုလ် ခုံ အား ပြည့် ခြင်း နှင့် သော ကြာ ခါး စီး ပါ ရှိ နေ သည့် အ တွက် ၊ တွယ် တာ မိ နေ ရ ခြင်း သာ ဖြစ် ပေ မည် ။
ဦး အား ရှောင် တိမ်း ရန် နည်း လမ်း ရှာ ကြံ ခါ ၊ စဉ်း စား နေ မိ သူ က ကျ မ ပင် ပြန် ဖြစ် နေ ပါ သည်။ အစ် မ ကြီး ကျယ် အား အ ပြစ် မြင် မိ နေ ခြင်း က ဘာ မျှ ပင် မ ကြာ လိုက် ပါ ။ ဝဋ် လည် တာ လား ဟု စဉ်း စား နေ မိ ပါ သည်။ ပြီး ပြီး ပျောက် ပျောက် မေ့ ထား လိုက် ခါ မှ ပင် ၊ ဝေ ဒ နာ အ သစ် က စ လာ ပြန် ပါ သည်။
မ ကြာ ပါ …။
ဦး က ဆိုင်း မ ဆင့် ၊ ဘုံ မ ဆင့် ချက် ခြင်း ဆို သ လို ချက် ခြင်း ပင် ပေါ က် ချ လာ ပြ န် သည် ။ ကျ မ နေ ထိုင် သည့် နေ ရာ အ ထိ ရောက် လာ ပြီး တွေ့ပါ သည် ။ သူ ့အ နေ ဖြင့် လက် ထပ် လို ကြောင်း ၊ အ သက် အား ဖြင့် လည်း ၊ အိမ် ထောင် ပြု ဘို့အ ချိန် တန် နေ သ ဖြင့် အ ချိန် ထပ် မ ဆွဲ ခြင် ဟု ပြော ပါ သည်။
သ္မီး မှာ ရည်း စား ရှိ နေ ပြီ လား ဟု လည်း မေး ပါ သည် ။
ရှိ သည် ဟု ညာ ပြီး ဖြေ မိ ပါ သည်။ တ ကယ် လက် တွေ့ပြ နိုင် လား ၊ လက် တွေ ့ပြ နိုင် မှ ယုံ မည် ဟု ပြော ပါ သည် ။ ဦး မ ယုံ လျှင် တော့ မ တတ် နိုင် ပါ ၊ ဟို တစ် ခေါက် က ၊ ကျ မ ကို ဦး က ညီ လေး လုပ် မ လား ၊ ရှပ် အ င်္ကျီ ပေး ဝတ် မည် ၊ ဒီ စ ကား ၏ အ ဓိ ပ္ပါယ် ကို ရှင်း ရှင်း လင်း လင်း သိ ချင် မိ ပါ သည် ဟု ပြော ပြ မိ ပါ သည်။
ကျ မ စိတ် ရူး ထ ခါ ထား ဘူး သည့် ၊ အ ချစ် တော် ကိစ္စ ဇတ် လမ်း တ ပုဒ် အား ဦး က သိ နေ ကြောင်း ဖွင့် ပြော ပါ သည် ။ မိန်း ခ လေး ခြင်း အ ချစ် တော် ထား ဘူး တာ ကြား သိ မိ ထား သည် ဟု ဦး က ဆို ပါ သည်။ နောက် တ ချက် က သ္မီး က ယော င်္ကျား လေး စိတ် ဆို တာ အ တိ အ ကျ သိ ထား သည် ဟု ထုတ် ပြော ပါ တော့ သည် ။
ဒါ ကြောင့် သာ ညီ လေး လို လုပ် ပြီး ၊ အ တူ နေ လျှင် ရ သည် ဟု စ တာ ဖြစ် ကြောင်း ပြော ပါ သည် ။ သ္မီး က မ ရ မ က မေး နေ သ ဖြင့် မ တတ် နိုင် ၍ ထုတ် ဖော် ပြော လိုက် ခြင်း သာ ဖြစ် သည် ။ လော က တွင် ကွယ် ဝှက် ထား သော အ ရာ ဆို တာ က မ ဖြစ် နိုင် ၊ သိ အောင် ကြိုး စား လျှင် ၊ အ မှန် တ ရား ဆို တာ က ပေါ် ပေါက် ရ စ မြဲ ဖြစ် သည် ဟု ဆို ပြီး ပြော ပါ သည် ။
ဦး က ဘာ လို့အဲ လောက် အ ထိ သိ နေ တာ လည်း ။ နတ် မျက် စေ့ ရှိ လို့သိ နေ တာ လား ။ ဦး ပြော သည် ကိ စ္စ က ကျ မ ၏ အ ရှိုက် အား ထိုး နှက် သ လို ဖြစ် နေ ပါ သည် ။ ဒီ ကိ စ္စ က ကိုယ် ရေး ကိုယ် တာ ကိ စ္စ ဖြစ် ၍ ပေါ် တင် ကြီး ထုတ် ဖော် ပြော လိုက် သ ဖြင့် အ ရှက် ကြီး ရှက် မိ ရ ပါ သည် ဟု ဦး ကို ပြော ပြ ဝန် ခံ လိုက် ရ ပါ သည်။
အ မှန် တ ကယ် ဆို လျှင် ၊ ကျ မ မိန်း မ သား ဖြစ် တာ ကို လက် ခံ နေ မိ သည် မှာ ဘာ မျှ မ ကြာ သေး ဟု ဦး ကို ပြော ပြ မိ ခါ အ တိ အ လင်း ဝန် ခံ လိုက် ရ သ လို ဖြစ် သွား ခဲ့ ရ ပါ တော့ သည်။
ဒီ ကိ စ္စ ကို ဦး က ဘာ ကြောင့် ဒီ လောက် တိ တိ ကျ ကျ သိ ထား ခဲ့ ရ သ နည်း ။ ရှက် စ ရာ ကောင်း လွန်း လှ သော ကိ စ္စ လည်း ဖြစ် ၍ ၊ ဦး ကို မုန်း စ ရာ ကောင်း သည့် ဦး ဟု သာ ဆို ချင် မိ ပါ သည်။
မိန်း ခ လေး ဖြစ် ပါ လျှက် ၊ ယောက် ကျား လေး လို နေ ထိုင် ခဲ့ ခြင်း ကိစ္စ က ကျ မ ၏ ရှက် စ ရာ အ တိတ် တ ခု အ ဖြစ် ခ လေး ဘ ဝ အ ရွယ် မှာ ကျန် ရစ် ခဲ့ ပြီ ဖြစ် ပါ သည် ။
ဒါ ကြောင့် ဦး က ရည်း စား ရှိ သည် ဟု ပြော သည် ကို လုံး ဝ လက် မ ခံ ပဲ လက် တွေ ့ပြ ခိုင်း တာ ကိုး ဟု သ ဘော ပေါက် ခဲ့ မိ ရ ပါ တော့ သည် ။
ဒီ အ ချိန် မှာ မိန်း ခ လေး စိတ် ဖြစ် နေ ပြီ ဆို တာ ၊ ဦး လက် ခံ ယုံ ကြည် ပါ တယ် ဟု ပြော ပါ သည် ။ လက် ကို ချက် ခြင်း ဖမ်း ရုတ် ပြီး ခေါင်း ငုံ ့နေ တာ ၊ နား ရွက် ထူ ပြီး နီ လာ တာ ဦး က စိ တ် ထဲ မှာ ဝမ်း သာ နေ မိ တာ ပါ ဟု ပြော ပြ ပါ သည် ။
ရည်း စား ရှိ တာ မှန် သည် ဆို လျှင် ၊ သ္မီး အ မှန် တ ကယ် မိတ် ဆက် ပေး နိုင် ရ မည် ဟု ပြော ဆို ပါ တော့ သည် ။ ဦး မ ပြန် ခင် သိ သွား ချင် သည် ဟု အ တင်း အ ကြပ် တောင်း ဆို ပါ သည် ။
အစ်မအေး ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်း သာ ဆိုရင်တော့
ဟိုလူကြီး က “အစ်မ ရဲ့ အစ်မ” ထက် အစ်မကို ပိုလို့ သံယောဇဉ် ဖြစ်နေတာပါလား။
အရီးပြောသလိုဆိုကောင်းသား…. တော်ကြာ ငါးမရ ရေချိုးပြန် ဆိုတဲ့သဘောလားလည်း မသိ… အဟီး.. စတာနော် အန်တီအေး…။
ဟုတ်တယ်။ မတော်ကြောင်ဝတုတ်လိုတန်းလန်းထားမှဖြင့်။ ဇာတ်သိမ်းကျမှ အစကနေဖတ်တော့ မယ်အမအေးရေ။ အားလုံးစုပြီးမှပဲမန့်တော့မယ်။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ အဲဒီ ဦး ရဲ့ လက္ခဏာကို ကြည့်ဖူးလား သိချင်လာတယ်။
သူ့လက္ခဏာက တခုခု ထူးခြားနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
မုန်းစရာ ကောင်းတဲ့ ဦး ကနေပြီးတော့ ချစ်ရပါသော ဦး ဖြစ်ဖို့ နည်းနည်းပဲ လိုတော့မယ် လို့ ထင်တယ်။
အေး..အဲဒါကို မျှော်နေတာ .. ကောင်းခန်းလေးတွေ လာတော့မယ်…။ အန်တီအေး ဆင်ဆာ မဖြတ်ကြေးနော်…
အန်တီအေးရေ ဇာတ်လမ်းကတော့ အရှိန်တက်လာပြီနော်။ နောက်အပိုင်းတွေလည်း မြန်မြန်လေးတင်ပေးပါဦး။ စောင့်မျှော်နေလျက်ပါ…………..
ကိုရီးယားကားကြည့်ရသလိုပဲမမအေးရေ… ဆန် ့ငင်ဆန် ့ငင်နဲ ့
ဇါတ်လမ်းက ဖတ်ရင်းနဲ ့အလုံးစုံမမှတ်မိတော့တာမို ့
မနေ ့ညက ကာလာအိုကေ ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့
ရင်ဂို ့သီချင်းစာသားလေး ကို ကွန်မင့်ခဲ့တာဘာ ။
ဥရယ်၊ ဥရယ်၊ ဥမလာတဲ့ ရက်ကလေးများဆို သာမီးဖြင့် သိပ်သိပ် လွမ်းတယ်၊၊၊၊ ကြိတ်ငိုရတယ် ချစ်ဆုံးဥရယ်၊ ဟဲဟဲဟဲ၊၊၊ နောက်တာနော်!
ဇာတ်လမ်းလေးကိုကြည့်ပြီးပဲ ကော့မန့်ရေးတာပါနော် …. အဟဲ … အန်တီ ့ဇာတ်လမ်းလေး …မဟုတ်လောက်ဘူးထင်ပါတယ် … ။
ဇာတ်လမ်းထဲက ဦးလေးကတော့ .. သိပ်မမိုက်ဘူး …. ။ မျက်နှာပြောင်တိုက်တယ်လို့မြင်တယ် … ကလေးအရွယ်လေးကို မကြံကောင်းမစည်ရာ …. ။ ငါးမရလျှင် ရေချိုးပြန်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးလို့တော့ … စာဖတ်သူနေရာက မြင်မိပါတယ် … ။ အစ်မ အကြီးအကြောင်းကို သိချင်လို့ …. သဘောင်္က ပြန်ဆင်းလာတယ် … ဒါပေမယ့် … ဒီရောက်တော့ စိတ်ကူးပြောင်းသွားတာ …. ။ သိပ်မမိုက်ဘူး လို့မြင်မိတယ် … ။
ကိုယ်သာ ဦးလေးနေရာမှာဆို … ကိုယ့်ကို မနှစ်သက်လို့ … ခိုးရာလိုက်ပြေးသူတွေရဲ့ မိသားစုနဲ့ .. အမျိုးတော်ဖို့ရော … မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖို့တောင် … ရှိန်နေမိမယ်ထင်တယ် ။ ကလေးတစ်ယောက်အပေါ် မရိုးမသားစိတ်ထားခဲ့မိလျှင်တောင်မှ ပါးစပ်က ပြောထွက်မှာ မဟုတ်ဘူးထင်တယ် …. ။ မာနနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်ပေါ့လေ … ။
ကောင်မလေးနေရာမှာဆိုလျှင်လည်း ……. ကိုယ်က အနေနီးလို့ … စိတ်လှုပ်ရှားမိပေမယ့် .. ရိုးရိုးသားသား သံယောဇဉ်ဖြစ်မိသူတစ်ယောက်အပေါ်… စွဲလန်းမှု ၊ကရုဏာသက်မှုတွေကို အချစ်လို့ အထင်မမှားသင့်ဘူး .. ။ ပြီးတော့ … မာန … မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ မာနနဲ့ …. အိန္ဒြေတွေကြောင့် … အစ်မကိုရည်ရွယ်ခဲ့ဖူးသူနဲ့ ပတ်သတ်ဖို့ မရွေးခဲ့မိသင့်ဘူး …….. ။
တကယ်တော့ … ဦးနဲ့ သမီးက … အချစ်ဆိုတာထက် …. အနေနီးလို့ သံယောဇဉ်တွေ ငြိကုန်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် .. ဒီအထဲမှာ အသက်အရွယ်အရ ဆန်းဆစ်တစ်ဗ်အရွယ်ဖြစ်လာတော့ ရင်ခုန်မယ် ..စိတ်လှုပ်ရှားမယ် … ဒါကို အချစ်လို့ ယူဆနေကြပုံပါ … ။
ဒီဦးလေး တော့အခြေနေမကောင်းဘူး။ ကြည့်ရတာမိန်းမတွေရဲ့ အရိပ်အကဲကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ဘဲ တုံးတာလား ကိုယ်တိုင်က အစွမ်းအစမရှိလို့ ဆွဲထုတ်မိတဲ့အစလေးကို မလွှတ်ချင်တာလား တခုခုဘဲ။ နောက်တယောက်က ပြသနာတက်မှာစိုးလို့ကြိုငြင်းတာတောင် ဇွဲကောင်းတုန်း။ မလွယ်ဘူး ဟူးဟူး
ဦးရဲ့မြှားဦးက သမီးဘက်လှည့်လာတော့မှာလားဟင် ..
ဇာတ်လမ်းကအရှိန်လေးရလာပြီဆိုတော့ အပိုင်း(6) ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ် အန်တီအေးရေ …
ရှေးခေတ်တုန်းက သဘောင်္သီး ဦး တို့များ…
တားတို့တော့ သူရို့ခြေဖျားကို မှီတောင်မမှီဘူး…။
အားကျပါရဲ့… ဦးရယ်… ;)
ဆောရီး ပါခင်ဗျာ ။ ဖတ်လို့ ကောင်းကောင်း နဲ့ဖတ်ပီး နောက်တောက်တောက်ရေးမိသွားတယ် ! ရှဲရှဲ ပါ! ဆုမိမာစံ ! ဖော်ဂစ်မီ ! ကျေနပ်ပါနော်! ချိတ်ချိုးရဘူး ! ထပ်ပီး မျှော်နေပါတယ် ! ( ၁၊၂၊၃၊၄၊၅ ) မနားတမ်းအားပေးသွားပါတယ် !